မြစ်ချောင်းများယုံကြည်ခြင်းအရင်းအမြစ | Apg29
အဆိုပါသမ္မာကျမ်းစာပစ္စည်းပရောဖက်ပြု / သ
ဒါကြောင့်သူတို့ကအရှေ့ဘက်မှမောင်းထုတ်ခဲ့ပုံပေါ်ဒါ, ဥယျာဉ်၏အရှေ့ဘက် - ငါတို့သည်ဧဒင်ဥယျာဉ် / ပရဒိသုဥယျာဉ်၏စဉ်းစားသောအခါသောကြောင့်, ကျနော်တို့ကအာဒံနဲ့ဧဝကမရှိတော့ကြောင့်ပြိုလဲအဲဒီမှာဆက်လက်ရှိနေရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်အခါသတိပြုပါ။
ပင်ပြန်လည်ယုံကြည်သူများအခြေအနေတွင်တောင်မှခရစ်ယာန်များစွာ, သံသယ, ကံမကောင်း, သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရ။ သို့သော်ဤသညျဘုရားသခငျ၏စစျမှနျသောဗျာဒိတ်အဖြစ်ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအပြည့်အဝသောကွှေးကျွောခွငျးဖွစျသညျ။ ဒါဟာငါ့အဘို့အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲဒီပမာဏကယ်ဆယ်ထိုဘေးဥပဒ်အင်အားကြီးဆန့်ကျင်နေ့စဉ်ဝိညာဉ်ရေးရာတိုကျပှဲတှငျနှင့်နေ့စဉ် multifarious ပြဿနာများ၏မျက်နှာများတွင်မကြာခဏယုံကွညျခွငျးအတှကျ, သမ္မာကျမ်းစာ၏ကြီးစွာသောပရောဖက်ပြုအမြင်များအချို့သို့ ယူ. ကြည့်နေစဉ်သည်။ ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးဖို့ယခုအချိန်မရှိဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်, တကနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အသကျရှငျ, ယုံကြည်ခြင်းအားယူမှအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ကောင်းပြီ, အခုပရောဖကျစကားလုံး ပို. ပင်မပြည့်စုံရလိမ့်မည်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ 10-14 နှင့်ယောဟန် 19: 33-34 ကျမ်း 1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး2Follow:
"ဧဒင်ဥယျာဉ်ကနေ, ကဥယျာဉ်ကိုစိုစေတဲ့မြစ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, ပြီးတော့လေးယောက်အဓိကအခက်အလက်သို့ကမ်းဝေငှတော်မူ၏။ ပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုရွှေအရပ်၌ဟဝိလ၏မြေတပြင်လုံး, ပတ်ပတ်လည်စီးဆင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုပြည်မှဖြစ်သောရွှေသည်ကောင်း; bdellium နှင့်ရှဟံကျောက်လည်းရှိ၏။ ဒုတိယမြစ်ကားဂိဟုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကုရှပြည်တရှောက်လုံးပတ်ပတ်လည်စီးဆင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ တတိယမြစ်တမြစ်တိုက်ဂရစ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရှေ့အာရှုရိစီးဆင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ "-" ။ စတုတ္ထဥဖရတ်မြစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သညျယရှေုသညျ လာ. သူပြီးသားသေကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်, သူတို့ကသူ့ခြေထောက်မချိုးဘဲ။ အဲဒီအစားချက်ချင်းအဲဒီမှာလှံနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်တက်စစ်သူရဲတယောက်ကပ်နှင့်ထက်သွေးနှင့်ရေထွက်လာ၏။ "
ကျနော်တို့အကြောင်းကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ပါကဘာလဲ, ပထဝီအနေအထားအရ, သမ္မာကျမ်းစာကနေ, (ယဇေ 32:12 cf. ) မြေ၏အလယ်ဗဟို၏တည်နေရာသည်။ အရှင်သက်သက်သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရဒိသု / ဧဒင်ဥယျာဉ် (ဟီဘရူး EDANS လျှပ်စစ်မီးအေဒင်။ ။ ) ဧဒင်ဥယျာဉ်; ချိုမြိန် ထောက်. သာယာသောပန်းခြံ; ရေပေါကြွယ်အသီးအနှံများဆိပ်ဧရိယာ။ ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဘာသာစကားပုံစံသွားလေ၏၏ ednah, လုံခြုံရေးအတွက် "ပျော်ရွှင်ရက်ပေါင်းကိုယ်တော်တိုင်စေဖို့" အရာနည်းလမ်း, ဟေဗြဲ။ Ganan ထံမှ Gan; "ကိုထိန်းသိမ်း" / "ကာကွယ်ပါ" ။ Cf. ဘာသာပြန်ပေးထားသည်ရှောလမုန် 4:12 ၏သီချင်း၏ဟီးဘရူးစာသား, အတူ: "တစ်ဦးပူးတွဲဥယျာဉ်ကိုငါ့နှမ, ငါ့သတို့သမီးတစ်ဦးတံခါးပိတ်ကောင်းစွာ, တစ်ဦးကိုတံဆိပ်ခတ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်" ။ 5:7ထိုအ Ester 1 မှာအဖြစ်ဟီဘရူး ginnah နှင့်အတူဖြည့် 7-8; လူမှုရေးဘဝနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများအတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုအရပျ, "နန်းတော်ဆိုင်သောခိုင်ခံ့သောဥယြာဉျ၌။ " ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်၌, သူ၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူဘုရားသခင့သူတို့၏ "ယုံကြည်ချက်" ဒါမှမဟုတ်မြွေကျေးဇူးတော်ထံမှအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့ကျဆုံးမီ "paraded" ဖူးအဘယ်မှာရှိ, ငါတို့သည်နောက်သမ္မာကျမ်းစာဒေတာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဥယျာဉ်မှသာ "ဝိညာဏ" လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥယျာဉ် "စိုက်ပျိုးနှင့်စောင့်မတော်မူ၏။ " အခါများအပြင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများမပါဘဲ ဧဒင်ဥယျာဉ်, ဖြစ်ကောင်းပိုကြီးတဲ့သဘောနဲ့မြေ၏အလယ်ဗဟိုမသာခဲ့ပေမယ့်ဂျေရုဆလင်ရာဇပလ္လင်မှာအထူးသရှိခဲ့သည် - သို့မဟုတ် ပို. ပင်တစ်စုစည်းစင်တာအတွက်: ဂျေရုဆလင် 900,fအတွက်ရှိရာပထမဦးဆုံးဗိမာနျတျော (ရှောလမုန်သည်) ထိုအရပ်ကို Kr ။ ။ မတ်တပ်ရပ်တစ်ချိန်က - အဘယ်မှာယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စိုက်ထူတစ်ကြိမ်။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဥယျာဉ်မှသာ "ဝိညာဏ" လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥယျာဉ် "စိုက်ပျိုးနှင့်စောင့်မတော်မူ၏။ " အခါများအပြင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများမပါဘဲ ဧဒင်ဥယျာဉ်, ဖြစ်ကောင်းပိုကြီးတဲ့သဘောနဲ့မြေ၏အလယ်ဗဟိုမသာခဲ့ပေမယ့်ဂျေရုဆလင်ရာဇပလ္လင်မှာအထူးသရှိခဲ့သည် - သို့မဟုတ် ပို. ပင်တစ်စုစည်းစင်တာအတွက်: ဂျေရုဆလင် 900,fအတွက်ရှိရာပထမဦးဆုံးဗိမာနျတျော (ရှောလမုန်သည်) ထိုအရပ်ကို Kr ။ ။ မတ်တပ်ရပ်တစ်ချိန်က - အဘယ်မှာယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စိုက်ထူတစ်ကြိမ်။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဥယျာဉ်မှသာ "ဝိညာဏ" လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥယျာဉ် "စိုက်ပျိုးနှင့်စောင့်မတော်မူ၏။ " အခါများအပြင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများမပါဘဲ ဧဒင်ဥယျာဉ်, ဖြစ်ကောင်းပိုကြီးတဲ့သဘောနဲ့မြေ၏အလယ်ဗဟိုမသာခဲ့ပေမယ့်ဂျေရုဆလင်ရာဇပလ္လင်မှာအထူးသရှိခဲ့သည် - သို့မဟုတ် ပို. ပင်တစ်စုစည်းစင်တာအတွက်: ဂျေရုဆလင် 900,fအတွက်ရှိရာပထမဦးဆုံးဗိမာနျတျော (ရှောလမုန်သည်) ထိုအရပ်ကို Kr ။ ။ မတ်တပ်ရပ်တစ်ချိန်က - အဘယ်မှာယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စိုက်ထူတစ်ကြိမ်။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။ ဧဒင်ဥယျာဉ်, ဖြစ်ကောင်းပိုကြီးတဲ့သဘောနဲ့မြေ၏အလယ်ဗဟိုမသာခဲ့ပေမယ့်ဂျေရုဆလင်ရာဇပလ္လင်မှာအထူးသရှိခဲ့သည် - သို့မဟုတ် ပို. ပင်တစ်စုစည်းစင်တာအတွက်: ဂျေရုဆလင် 900,fအတွက်ရှိရာပထမဦးဆုံးဗိမာနျတျော (ရှောလမုန်သည်) ထိုအရပ်ကို Kr ။ ။ မတ်တပ်ရပ်တစ်ချိန်က - အဘယ်မှာယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စိုက်ထူတစ်ကြိမ်။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။ ဧဒင်ဥယျာဉ်, ဖြစ်ကောင်းပိုကြီးတဲ့သဘောနဲ့မြေ၏အလယ်ဗဟိုမသာခဲ့ပေမယ့်ဂျေရုဆလင်ရာဇပလ္လင်မှာအထူးသရှိခဲ့သည် - သို့မဟုတ် ပို. ပင်တစ်စုစည်းစင်တာအတွက်: ဂျေရုဆလင် 900,fအတွက်ရှိရာပထမဦးဆုံးဗိမာနျတျော (ရှောလမုန်သည်) ထိုအရပ်ကို Kr ။ ။ မတ်တပ်ရပ်တစ်ချိန်က - အဘယ်မှာယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စိုက်ထူတစ်ကြိမ်။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။ ငါ "မြေကြီးများ၏နှလုံး" ၏တည်နေရာကိုညွှန်ပြ။ ဘယ်မှာသော့ခလောက်နှင့်သပိတ်ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအရပ်ဌာန၌ရှိသကဲ့သို့, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဘယ်နေရာမှာအခြားမွကွေီးပျေါမှာ, ticking နှင့်လည်းဂျေရုဆလင်များ၏ပြဿနာနိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကာလဖြစ်၏။ ပြီးတော့ဂျေရုဆလင်နှင့်ဗိမာန်တော်၌အလွန်အရေးပါ၏လေတိုက်နှုန်း။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် / တရားသဖြင့်စီရင်လုပ်ရပ်များ
ကျနော်တို့ပထဝီထဲမှာအနည်းဆုံးနှစ်ခုအဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများမှာ, သန့်ရှင်းသောပုံပြင်များအဖြစ်ကမျြးစာကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဘုရားသခငျ့တရားသဖြင့်စီရင်၏ပြုမူကြောင်း, ငါတို့စဉ်းစားသည့်အခါ, စိတျထဲထားပြီးတော့နှင့်ယခုမြေကြီးတပြင်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမွကွေီးပျေါမှာသူ Babel ၏မြို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာချလိုက်ပြီးသည့်အခါညျဘုရားသခငျ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကြီးနှင့်ရှက်ကြောက် / လူများရှုပ်ထွေးဘာသာစကား, သူတို့ (2000 ဘီစီခန့်) တော့ဘူးအချင်းချင်းနားမလည်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့် - ငါတို့သည်အကြောင်းကိုဘာမျှမသိသော။ မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကျော်ထိုအရပ်မှသူတို့ကိုထွက်ဒီတော့ထာဝရဘုရားထံတော်ပြန့်ပွား ", သူတို့သည်မြို့ကိုမတည်ရပ်တန်: ဒါပေမယ့်အဖြစ်က (8-9 1 ထှကျမွောကျရာ 11) ဟုခေါ်သည်။ ထာဝရဘုရားထံတော်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏ဘာသာစကားကိုရှိသည်ရှက်ကြောက်ခြင်း, ထိုအရပ်မှသူအပေါငျးတို့သညျမွကွေီးပျေါကျော်ကသူတို့ကိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသောကွောငျ့ကဟီးဘရူးနာမကိုအမှီ Babel ( "ရှုပ်ထွေးမှုများ" / "ရှုပ်ထွေးမှုများ") ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ "
ကျနော်တို့ကဒီနေရာမှာဖော်ပြရာအရပျထဲကခံစားရအခြားဥပမာများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကမ္ဘာမြေရဲ့ပထဝီနှင့်အသက်အဘို့ကိုဆိုလိုတာဆီသို့ရောက် လာ. , အဘယ်အရာကိုမဆိုအသိပညာမရှိကြပါဘူး။ "သခင်ဘုရား၌အာမောရိပေး၏အခါနေ့တှငျဤ၏ပထမဦးဆုံးသခင်ဘုရားကို (1400 နှစ်ကဘီစီခန့်) သည်ကိုယ်တော်ကျွန်ကိုယောရှု၏ပရောဖကျ" ဆုတောငျး "(: 12-13 ယောရှုသည် 10) အပြီးနေနှင့်လတစ်ချိန်ချိန်ရပ်တန့်ခဲ့ '! မွို့ချိုင့်၌, Sol ဂိဗောင်မှာရပ်နေနှင့်လ' နှင့်လူများတို့ကိုသူတို့ရန်သူများကိုအပျေါမှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုအပြစ်ဒဏ်မပေးမှီတိုင်အောင်, နေတုန်းပဲရပ်လျက်, လတည်းခို ": ဣသရေလအမျိုးကိုအကြမ်းဖက်မှုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ထိုသခင်အားယောရှုသည်မိနျ့တျောမူ၏။
ဦးဆောင်သူနှစ်ဦးကို "နက္ခတ္တဗေဒ" ၏ဒုတိယအဖြစ်အပျက်, ကမ္ဘာမြေနှင့်၎င်း၏သဘာဝအဘို့အဓိပ်ပာယျ-ဝိညာဉျကိုဆုံးဖြတ် - ကသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားအတွက်ရောက်စေဖို့မဖြစ်နိုင်ပါသော်လည်း -2ဓမ္မရာဇဝင် 20 ၏ပွောဆိုနကွေ: 8-11 နှင့် 6-700 အပေါ်ဖြစ်ပျက် ရာစု f.Kr: ။ "ထိုအခါ (မင်းကြီးသည်) ဟေဇကိသည် Isaiah'Vad ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလတံ့သောလက္ခဏာသက်သေဖြစ်, ငါထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သို့တက်သွားကြလိမ့်မည်ဟု (ပရောဖကျ) ဟုဟေရှာယ said'Detta? သခင်ဘုရားသည်ဟုသူကပြောသည်ထားပါတယ်ဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်သောထာဝရဘုရားထံတော်မှနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်: (အချိန်) အရိပ် (။ အာခတ်မင်းကြီးရဲ့ sundial, ငါ့မှတ်စုမှာ) ရှေ့ကိုတဆယ်ခြေလှမ်းများ (ဇ) လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဆယ်ခြေလှမ်းများ (ဇ) ပြန်သွားပါလိမ့်မည်နည်း ဟေဇကိသည် said'Det ရှေ့ဆက်တစ်ဆယ်ခြေလှမ်းများကျဆင်းဖို့အရိပ် (အချိန်) များအတွက်လွယ်ကူသည်။ အဘယ်သူမျှမ, tillbaka ကထက်လမ်းလျှောက်တစ်ဆယ်ခြေလှမ်းများ (ဇ) ကြကုန်အံ့။ '' ပရောဖက်ဟေရှာယထာဝရဘုရားအားအျောဟစျပါ၏,
ကောင်းပြီ, နှစ်ခုသဘာဝဘေးအန္တရာယ် / တရားစီရင်ခြင်းကိုသငျသညျယနေ့မွကွေီးပျေါမှာခြေရာတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရလာဒ်များနှင့်အတူပြုမူပြန်။
ပထမဦးဆုံး 2400 နှစ်ပေါင်းဘီစီ ပတ်သက်. ဖြောင့်မတ်နောဧရဲ့အချိန်၏ "ရေလွှမ်းမိုး" ဖြစ်ပါသည် (1 ထှကျမွောကျရာ 7: 17-20, 24, 9: 18-19): "ဒီမြစ်တမြစ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာအရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးကြီးနှင့်, ရေထကမြေကြီးတပြင်အထက်မြင့်တက်နိုင်အောင်သေတ္တာကိုရုပ်သိမ်း။ အဆိုပါရေအရှိန်နှင့်မြေကြီးအထက်မြင့်သောထသဖြင့်, သင်္ဘောရေပေါ်မှာမြောနေသည်။ ကမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်ကြီးအပေါင်းတို့ဖုံးလွှမ်းသည်အထိထိုအရေ, မြေကြီးပေါ်မှာ ပို. ပို. ထွက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ တဆယ် (7.5 မီတာတစ်အရွယ်ရောက်လူကို, ငါ့မှတ်စု၏လက်ရုံးအဘို့တွက်ချက်ဟောင်းအယူအဆအရသိရသည်တောင်တတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့။ ) တောင်ရှိသောနှင်းဆီရေထိပ်အထက်, နှင့်တောင်များဖုံးလွှမ်းခဲ့သည် ... ထိုရေတစျရာ့ငါးဆယ်လက်ထက်၌မြေကြီးကိုအထက်ပါမြင့်မားမတ်တပ်ရပ် ... နောဧ၏သား အဘယ်သူသည် (တောင်ပေါ်ကအာရမနိ, ငါ့မှတ်စုအပေါ်။ ) သင်္ဘောထဲကထွက်သွားလေ၏ရှေမ, ဟာနှင့်ယာဖက်ရှိကြ၏။ ဟာမသည်ခါနာန်၏အဘဖြစ်၏။ ဤသုံးပါးနောဧ၏သားတည်း, ထိုသူတို့ထံမှကမ္ဘာပေါ်မှာလူတိုင်းထွက်ပျံ့နှံ့ပြီ။ "
ဒုတိယသဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်ဘုရားသခငျ့တရားသဖြင့်စီရင်သောလုပ်ရပ်, နောဧရဲ့သားသုံးယောက်၏ထံမှဆီးမိုက်မိသားစုရှေမကိုခေါ်, ဘိုးဘွား, ဟဗွေဲ (ebréerna) ၏ (အစ 2000 f.Kr ခန့်) တက်ကြွသောအခါ။ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် 1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 10 ခုနှစ်တွင်: တဖန်ရှေမ၏ "၏သား: ဧလံ (။ ရှား / အီရန်မိနစ်, မှတ်စု), အာရံ, Lud နှင့်ရှုရိ 21-25 ဇာတ်စင်ပေးအပ်သည်။ ရှုရိရဲ့သားဥဇ, Hul, Gether နှင့် mash ခဲ့ကြသည်။ အာရံပုဟေဗာ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့သည် (ဤအရပ်, အရှင်ebréer / ဟေဗြဲ, ငါ့မှတ်စု။ ) ။ ကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုအ: "ဟေဗာသည်အဘို့သားနှစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ တလက်ထက်တော်ကာလအတှငျးမွကွေီးပျေါမှာကိုခှဲဝေခဲ့သည်များအတွက်, ဖာလက်သည် (ဟေဗြဲ။ မျှဝေခြင်း) ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
။ 1 1 ကမ်ဘာဦး 1: 19-10 ဘုရားသခင့ဖန်ဆင်းခြင်းသူ့လုပ်ရပ်အတွက်မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ရေကိုခြောက်သွေ့မြေ, "ဘုရားသခ said'Vattnet shared ကြောင်းပြပွဲတစ်နေရာတည်းထံမှာစုဝေးခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ synligt ဖြစ်လာပါစေရမည် 'ဘုရားသခငျကုန်းကမ္ဘာမြေခေါ်သဖြင့်, နှင့်ရေစုဆောင်းမှုသူသမုဒ်ကိုခေါ်။ ထိုသို့ကောင်းသောခဲ့တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမြင်။ "လို့ကျမ်းစာအရ, ဒါကြောင့်, အဲဒီမှာစပိုင်းတွင်ပိုပြီးမိုးနည်းရေရှားဒေသများခဲ့ပေမယ့်မြေယာတစ်ခုတည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခဲ့သမုဒ်သီးခြားစီစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူမှတ်ခံရဖို့တစ်ခုထက် ပို. တိုက်ကြီးရှိသည်နှင့်အတူဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကြောင့်စတုရန်းသနည်း ကောင်းပြီ, 1912 ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်မှာ '' တိုက်ကြီး '' လှုပ်ရှားမှု "ဖြစ်ရပြီသောဂျာမန်ပါမောက္ခအဲဖရက် Wegener, ပွနျဆိုထားသော။ အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက် မှစ. ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ဆွဲထား, သဘာဝဖြစ်ရပ်နှစ်ခုတိုက်ကြီးအတွက်မြေဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက် "ထခွဲထွက်" အဖြစ်ရှိခဲ့သည်။ အတ္တလန္တိတ်အရှေ့တလျှောက်စစ်တမ်းများနှင့်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှတဆင့်သူသည်တွင်းထွက်နိုငျငံတျောသညျ, စက်ရုံနိုင်ငံတော်သို့နှင့်တိရိစ္ဆာန်နိုငျငံတျောသညျမှခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုတွေ့ သောနှစ်ခုတိုက်ကြီးတစ်ချိန်ကပူးပေါင်းခဲ့ကြရပါမည် - နှင့်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုမူလကအတူတူထား (မွကွေီးပျေါမှာကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုနှင့်အတူသင်တန်း၏) အရာခပ်သိမ်း၏သီအိုရီ disproved မထားပါဘူး။ မည်သူမဆိုတစ်ဦးကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်ဤအကြောင်းကမ်းခြေလေ့လာဖို့နှင့်ကပဟေဠိများကဲ့သို့, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကြီးထွားလာနေတဲ့ဒဏ်ရာရဲ့အနားကဲ့သို့အတူတူသူတို့ကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မယ်ပုံကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုကကျနော်တို့ဟေဗာ, ဖာလက်သည် (ဟေဗြဲမျှဝေခြင်း။ ) ၏သားကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ "သူ့အချိန်မှာတော့မြေကြီးကိုခွဲဝေခဲ့ပါတယ်" 1861 သူ၏ရှင်းပြချက်သမ်မာကမျြးတှငျမွကွေီး "ချ" ကျဆင်းသွားကြောင်း, P ကို ​​Fjellstedt ဤကျမ်းပိုဒ်ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဒါဟာဘုံဘာသာစကားမတိုင်မီ "ကိုအပိုင်းပိုင်းသို့" ပြိုလဲခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုရဲ့ style အတွက်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦး "ပြိုကွဲ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုတစ်ဦးကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်ဤအကြောင်းကမ်းခြေလေ့လာဖို့နှင့်ကပဟေဠိများကဲ့သို့, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကြီးထွားလာနေတဲ့ဒဏ်ရာရဲ့အနားကဲ့သို့အတူတူသူတို့ကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မယ်ပုံကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုကကျနော်တို့ဟေဗာ, ဖာလက်သည် (ဟေဗြဲမျှဝေခြင်း။ ) ၏သားကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ "သူ့အချိန်မှာတော့မြေကြီးကိုခွဲဝေခဲ့ပါတယ်" 1861 သူ၏ရှင်းပြချက်သမ်မာကမျြးတှငျမွကွေီး "ချ" ကျဆင်းသွားကြောင်း, P ကို ​​Fjellstedt ဤကျမ်းပိုဒ်ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဒါဟာဘုံဘာသာစကားမတိုင်မီ "ကိုအပိုင်းပိုင်းသို့" ပြိုလဲခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုရဲ့ style အတွက်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦး "ပြိုကွဲ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုတစ်ဦးကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်ဤအကြောင်းကမ်းခြေလေ့လာဖို့နှင့်ကပဟေဠိများကဲ့သို့, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကြီးထွားလာနေတဲ့ဒဏ်ရာရဲ့အနားကဲ့သို့အတူတူသူတို့ကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မယ်ပုံကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုကကျနော်တို့ဟေဗာ, ဖာလက်သည် (ဟေဗြဲမျှဝေခြင်း။ ) ၏သားကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ "သူ့အချိန်မှာတော့မြေကြီးကိုခွဲဝေခဲ့ပါတယ်" 1861 သူ၏ရှင်းပြချက်သမ်မာကမျြးတှငျမွကွေီး "ချ" ကျဆင်းသွားကြောင်း, P ကို ​​Fjellstedt ဤကျမ်းပိုဒ်ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဒါဟာဘုံဘာသာစကားမတိုင်မီ "ကိုအပိုင်းပိုင်းသို့" ပြိုလဲခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုရဲ့ style အတွက်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦး "ပြိုကွဲ" ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ကျောကမူလစာသားကိုမှ: "ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေ, တကမြစ်ကိုရေကဲ့သို့ဥယျာဉ်-ဝင်းကြီး, ပြီးတော့လေးယောက်အဓိကအခက်အလက်သို့ကမ်းဝေငှတော်မူ၏။ " အများကြီးအကြာတွင်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်မှာမြေကြီး, ၏ဗဟိုအတွက် / ပေါ်တွင်နက်ရှိုင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တခုရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်ဒါက; တစ်ဦးအပြေးအလွှားမြစ်ကိုတက်ပြေးလေ၏။ ငါ '' မြစ် '' အရင်းအမြစ် '' ကကိုခေါ်ပါ။ 5: တဖန်သင်တို့ဆာလံ 46 ကိုကျော်သွားလို့မရဘူး "ဟုမြစ်ဘုရား, အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏သန့်ရှင်းသောကျိန်းဝပ်ရာမြို့မှပေးဝမ်းမြောက်သောစိတ်စီးဆင်းရှိပါသည်။ "
638 ကတည်းကသမိုင်းဝင် "ဗိမာနျတျောတောင်ပေါ်မှာ" တွင်သေးငယ်တဲ့ al-Aqsa ဗလီနှင့်အတူရော့ခ်၏ကြီးမားသောမွတ်စလင်ခုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့သုတေသီများမှလက်ျာဘက်ဆင်းရပါဘူး, ထိုသို့ပြုမှမဟုတ်ဘဲဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များအများစုရရှိသွားတဲ့ - ဒါပေမယ့်သူတို့ကနှစ်ဖက်စလုံးမှဆင်းတူးဆိုလို, နှင့်တားမြစ်ထား "နွယ်ဖွား" အတှငျးမထားဘူး။ သူတို့ကရှေးဟောင်းဗိမာနျတျောဧရိယာအတွင်းရှိရေနက်ရှိုင်းချ၏အသံဗလံကိုကြား - အစောပိုင်း 1970 ခုနှစ်, ဂျူးနှင့်အနောက်တိုင်းရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းမှတ်ချက်။ ဤအရပ်ဌာနနှင့် ပတ်သက်. "မွို့အောက်မှာမွို့" အကြောင်းကိုဟောပြောပွဲယနေ့ရှိပါသည်။ ဗိမာနျတျောမှတက်ဦးဆောင်ယေရှုရဲ့အချိန်လမ်းကြောင်းကို - (ဆိုလိုသည်မှာဒုတိယကြောင့်ဟေရုဒ်မင်း၏ "ဇေရုဗဗေဗိမာနျတျော", ဂျူးကျောင်းအုပ်ကြီးဘီစီ 500 ပြီးနောက်နှငျ့ "ဟေရုဒ်မင်း၏ဗိမာနျတျော", ဒီဗိမာန်တော်၏မဟာရဲ့ချဲ့ထွင်မှုဟုခေါ်တွင် ပဲ) ခရစ်တော်၏မွေးခင် - 2004 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ယခုနှစ်တွင်လည်းယေရုရှလင်မြို့၌ဖွင့်လှစ် (အထကျ Al-Aqsa ဗလီ၏အန္တရာယ်မှာပြိုကျမယ်လို့) အကြီးအစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်း၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာအခြေခံအုတ်မြစ် "ဒါဝိဒ်၏စီးတီး" ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Doron Spielman ပြောနှင့်ဟုသူကဆိုသည်, အခြားသူများအကြား။ "ဒီအရပ်ဌာနဂျူးလူမျိုး၏နှလုံးသည်နှင့်ကြောင့်သွေးပြန်ကြောထဲမှာစီးသောထိုအသွေးဖြစ်၏။ "
ဒါပေမယ့်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်လွန်ခဲ့သောယခုအချိန်တွင်တားဆီးခဲ့ပါတယ်နှင့်သားကောင်အစားချုံထဲမှာဦးခေါင်းကို / ဦးချို (1 ထှကျမွောကျရာ 22: 11-14) အတူ flyer သူတစ်ဦးသိုးထီး /a"ကိုခုတုံး လုပ်. " ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကညာဘက်ပဲ!
အဆိုပါသမ္မာကျမ်းစာပစ္စည်းပရောဖက်ပြု / သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ "သင့်ပါတယ်" gurgle နှင့်ဆံပင်, ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်တက်တရားစွဲဆိုထားသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအရှေ့ဘက်မှမောင်းထုတ်ခဲ့ပုံပေါ်ဒါ, ဥယျာဉ်၏အရှေ့ဘက် - ငါတို့သည်ဧဒင်ဥယျာဉ် / ပရဒိသုဥယျာဉ်၏စဉ်းစားသောအခါသောကြောင့်, ကျနော်တို့ကအာဒံနဲ့ဧဝကမရှိတော့ကြောင့်ပြိုလဲအဲဒီမှာဆက်လက်ရှိနေရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်အခါသတိပြုပါ။ က output နဲ့ input ကိုမှာအတွင်းလမ်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ "eldsänglar" ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထား, ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပိုမိုအဲဒီမှာအတွက်အနောက်မြောက်ဘက်မှအဘို့, ကောင်းမကောင်းမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုသိကျွမ်းရာအပင်၏အသီး, ဒါပေမယ့်လည်း "အသကျသစ်ပင်" မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ က (1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 3:22) အသံအတိုင်း: "အဆိုပါဘုရားသခငျထာဝရဘုရား said'Se လူကိုအကောင်းနှင့်မကောင်းသောအသိမှတ်ကိုတဦးတည်းကဲ့သို့ဖွစျခဲ့သညျ။ ယခုသူသည်မိမိလက်ကိုထွက်မရောက်နိုင်ဘူးနဲ့အသက်ပင်၏အစကို ယူ. မစားခြင်း, (ထိုအပြစ်တရားနဲ့, ငါ့မှတ်စု။ ) ထိုအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်။ "
ကျွန်တော်ယခုဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အကြောင်းကိုအနည်းဆုံးသညျဘုရားသခငျ၏လာမယ့်နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်၌လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌, ထို့နောက်မှစတင်, ယေဇကျေလ 46 နဲ့ 47 နဲ့လေ့လာနေအနာဂတ္တိမှပွညျ့စုံကျွန်တော်တို့ကိုယူလျှင် - က 46 မှာပြောပါတယ်အဖြစ်: 19-20: " သူ ( "ကောင်းကင်တမန်သည်လူ") ဝေးအနောက်ဘက် (ဆိုလိုသည်မှာအနောက်ဘက်ဆီသို့ဦးတည်တဲ့နေရာရှိကွောငျးကိုသန့်ရှင်းသောအခန်းများမြောက်ဘက်သို့မျက်နှာပြုသောယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်သို့တံခါးဝနားမှာခဲ့သည့် entry ကို, မှတစ်ဆင့်ငါ့ကိုဆောင် သွား. , ငါမြင် , ငါ့မှတ်စု။ ) ။ သူယဇ်ပုရောဟိတ်ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သက္ကာကိုပြုတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာသူတို့ပြင်တန်တိုင်းမှထုတ်သယ်ကားကလူ heligt စေရန်ရှိခြင်းမဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာဖုတ်ပါလိမ့်မယ်ရာအရပ်ဖြစ်ပါသည် me'Detta မှကပြောပါတယ်။ " '
ကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်ဘယ်မှာဂျေရုဆလင် (ဧဒင်ဧဒင်ဥယျာဉ် / ဥယျာဉ်၏အဟောင်းဧရိယာ) တွင်ထင်နှင့်ကရာနီယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ယဇ်ပူဇော်သည်သေခြင်းခံစားခဲ့ရသည့်အမြင့်မှာဘာကိုစဉ်းစားကြပါစို့။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့် (အနည်းငယ်အရှေ့တောင်ဘက်) သည်အရှေ့မျက်နှာမှဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ် - ညာဘက်တမြို့မှတဆင့်နှင့်ညာဘက်ဗိမာနျတျောတစျဆငျ့နည်းနည်းအနောက်မြောက်ဘက်ရန်။ ကျနော်တို့ကဆြုံးက "ကောင်းသောမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုသိကျွမ်းရာအပင်ကို" နှင့်ရှိရာ "အသကျသစ်ပင်" လည်းမတ်တပ်ရပ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိရာစံချိန်မှသာတစ်ဦး "ဦးခေါင်းအာကာသ" (အနောက်?) ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိသည်။ ထိုအခါအာဗြဟံရဲ့ Moria အပေါ်အဓိကတည်နေရာကို (မရသေးသောဂျေရုဆလင်မြို့ built သို့အနည်းငယ်အနောက်မြောက်ဘက်) ဣဇာက်ကိုယဇ်ပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသည်မည်မျှအောက်ပါအတိုင်း။ အချိန်ကိုခန့်မှန်းသည်ဤဖို့ဖြစ်ပါတယ် Added - ကြီးတွေလယ်သမား Arunas ယဇ်ပုရောဟိတ်က 'ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကိုပြုတ်သင့်ပါတယ်ရှိရာအဓိကဆိုဒ် (တစ်ခုခုအနောက်မြောက်ဘက်), ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဗိမာနျတျောတည်ဆောက်သောရှောလမုန်၏နယ်ကြမ်းပြင်ကိုရောင်း "။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအတွက်, ယေရုရှလင်မြို့၌သညျယရှေုလက်ဝါးကပ်တိုင်အသေခံခံစားနေရပြီး (ကဆိုးဝါးဦးနှောက်နဲ့ဆင်တူ) ကရာနီ, ဗိမာနျတျောတိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးအနောက်မြောက်ဘက်နှင့်မွို့ "ဦးခေါင်း, နေရာချရကြလိမ့်မည်" ။ ဒီဟာသင်္ချိုင်းတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်, ယခုဥယျာဉ် / ဧဒင်ဥယျာဉ်ဧရိယာထဲမှာပြန်ဧဒင်ဥယျာဉ်မှထောက်ပြဘယ်လို rated အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသခင်ယေရှု၏သင်္ချိုင်း, တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေး (45 မီတာ) ပြီးနောက်။ ယုဒလူအစဉ်အလာအရ, Talmud အာဒံဤအရပ်ဌာန၌သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှအထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာလက်ဝါးကပ်တိုင်အောက်မှာသင်္ချိုင်းတွင်း၌အာဒံရဲ့ဦးခေါင်းခွံနှင့်အတူကရာနီတောင်ကုန်းသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကနေဘေးကင်းလုံခြုံစေ: "ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ရာအရပ်၌ရှိဥယျာဉ်ကြီးနှင့်ထိုဥယျာဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမချသေးသော်လည်းခဲ့တဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘိတ်၏ဂျူးနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်သင်္ချိုင်းအနီးအနားကြောင့်ရှိတယ်သူတို့သညျယရှေုကို တင်. "(ယောဟန် 19: 41-42) ။ ။ ဒီဟာသင်္ချိုင်းတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်, ယခုဥယျာဉ် / ဧဒင်ဥယျာဉ်ဧရိယာထဲမှာပြန်ဧဒင်ဥယျာဉ်မှထောက်ပြဘယ်လို rated အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသခင်ယေရှု၏သင်္ချိုင်း, တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေး (45 မီတာ) ပြီးနောက်။ ယုဒလူအစဉ်အလာအရ, Talmud အာဒံဤအရပ်ဌာန၌သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှအထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာလက်ဝါးကပ်တိုင်အောက်မှာသင်္ချိုင်းတွင်း၌အာဒံရဲ့ဦးခေါင်းခွံနှင့်အတူကရာနီတောင်ကုန်းသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကနေဘေးကင်းလုံခြုံစေ: "ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ရာအရပ်၌ရှိဥယျာဉ်ကြီးနှင့်ထိုဥယျာဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမချသေးသော်လည်းခဲ့တဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘိတ်၏ဂျူးနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်သင်္ချိုင်းအနီးအနားကြောင့်ရှိတယ်သူတို့သညျယရှေုကို တင်. "(ယောဟန် 19: 41-42) ။ ။ ဒီဟာသင်္ချိုင်းတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်, ယခုဥယျာဉ် / ဧဒင်ဥယျာဉ်ဧရိယာထဲမှာပြန်ဧဒင်ဥယျာဉ်မှထောက်ပြဘယ်လို rated အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသခင်ယေရှု၏သင်္ချိုင်း, တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေး (45 မီတာ) ပြီးနောက်။ ယုဒလူအစဉ်အလာအရ, Talmud အာဒံဤအရပ်ဌာန၌သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှအထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာလက်ဝါးကပ်တိုင်အောက်မှာသင်္ချိုင်းတွင်း၌အာဒံရဲ့ဦးခေါင်းခွံနှင့်အတူကရာနီတောင်ကုန်းသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကနေဘေးကင်းလုံခြုံစေ: "ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ရာအရပ်၌ရှိဥယျာဉ်ကြီးနှင့်ထိုဥယျာဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမချသေးသော်လည်းခဲ့တဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘိတ်၏ဂျူးနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်သင်္ချိုင်းအနီးအနားကြောင့်ရှိတယ်သူတို့သညျယရှေုကို တင်. "(ယောဟန် 19: 41-42) ။ ။ အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာလက်ဝါးကပ်တိုင်အောက်မှာသင်္ချိုင်းတွင်း၌အာဒံရဲ့ဦးခေါင်းခွံနှင့်အတူကရာနီတောင်ကုန်းသရုပ်ဖော်သည်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကနေဘေးကင်းလုံခြုံစေ: "ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ရာအရပ်၌ရှိဥယျာဉ်ကြီးနှင့်ထိုဥယျာဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမချသေးသော်လည်းခဲ့တဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘိတ်၏ဂျူးနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်သင်္ချိုင်းအနီးအနားကြောင့်ရှိတယ်သူတို့သညျယရှေုကို တင်. "(ယောဟန် 19: 41-42) ။ ။ အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာလက်ဝါးကပ်တိုင်အောက်မှာသင်္ချိုင်းတွင်း၌အာဒံရဲ့ဦးခေါင်းခွံနှင့်အတူကရာနီတောင်ကုန်းသရုပ်ဖော်သည်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကနေဘေးကင်းလုံခြုံစေ: "ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ရာအရပ်၌ရှိဥယျာဉ်ကြီးနှင့်ထိုဥယျာဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမချသေးသော်လည်းခဲ့တဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘိတ်၏ဂျူးနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်သင်္ချိုင်းအနီးအနားကြောင့်ရှိတယ်သူတို့သညျယရှေုကို တင်. "(ယောဟန် 19: 41-42) ။ ။
ထို့အပြင်ယခုယေဇကျေလ 47: 1-2: အရှေ့ဘက်အပေါ်ပြန်အိမ်သူအိမ်သား (ဗိမာနျတျော) ဝင်ပေါက်ကို၎င်း, (ဗိမာနျတျော) အရထံမှထွက်ထုတ်ပေးကှ္ဂျကှ္ဂျရေ "(။ ကောငျးကငျတမနျလူ", ငါ့မှတ်စု) ငါ့ကိုထိုသူတို့ယူဆောင် "တံခါးခုံကို (ဆီသို့ဦးတည် အရှေ့နှင့်ရင်ဆိုင်နေရဂေသရှေမန်, သံလွင်နှင့်ကေဒြုန်ချိုင့်ဝှမ်းတောင်ပေါ်, ငါ့မှတ်စု။ ), အိမ်တော်အဘို့ (ဗိမာနျတျော) ရှေ့နှင့်ရေအိမ်သူအိမ်သား (ဗိမာနျတျော) တောင်ဘက်ခြမ်း, ယဇ်ပလ္လင်၏တောင်ဘက်ကိုဆင်းစီး။ ထိုအခါသူသည်မြောက်တံခါးအားဖွငျ့အကြှနျုပျကိုနှုတျဆောငျနှင့်အရှေ့ဘက်သို့မျက်နှာပြုသောပြင်တံခါးသို့မှမရှိဘဲလမျးကိုအကြှနျုပျထကျဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ (ပင်လယ်သေ, ငါ့မှတ်စုဆီသို့ဦးတည်ပါ။ ) တောင်ဘက်ခြမ်းကနေငါမြင်ရေစမ်းထုတ်။ "ကျနော်တို့ကတစ်ဦးကို dual ပါဝါအကြောင်းကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ (အရှေ့ဘက်တံခါးခုံအောက်မှာကနေရေတွင်းများတက်နှင့်ကအရှေ့တောင်ဘက်အခြမ်းကနေထွက်စီးဆင်း) ။ ဒီနောက်တဖန်တက်တက်နေရင်းနှင့်အမျှရှေးဟောင်း '' မြစ်များ '' အရင်းအမြစ် '', "ကြမ်းပြင်နယ်တတ်သည်" jebusiten ရောန / အရောနအဟောင်းကြီးတွေလယ်သမားထံမှလက်ျာဘက်တက်လား?
'' မြစ်ချောင်းများ '' အရင်းအမြစ် ''
/ ကျေးဇူးပြု. လေ့လာမှုယော်ဒန်မြစ်အဘို့အကျမ်းစာထဲမှာအရာအားလုံး (တော်တော်များများအဓိပ္ပါယ်များ၎င်း၏ရေ) နှင့်ယနေ့ရှေးဟောင်းသုတေသနujpptäckter၏အလငျး၌ကမှာကြည့်။ /
ထိုအခါမူကား, မူလကဧဒင်ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောလေးလမ်းညွန်အတွက်အလုံအလောက်ထွက်အရှင်အပြည့်အဝရေလောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဒါတစ်ခုလုံးကိုဧရိယာအကြောင်း, မြစ်များမြော။ ငါကို tick / လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့တူအထက်မှမြင်မှာ "အရင်းအမြစ်" နှင့်အကိုင်းအခက်, မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အလယ်၌ Upflow, ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်လေးမြစ်များ။ လည်းသခင်ယေရှုနှင့်သူ့ကို ပတ်သက်. လေးခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ခုအစောပိုင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောပရောဖကျစံပြရှိလိမ့်မည်။ ဂျူးလူတွေရဲ့ကယျတငျတျောမူခွငျးအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်နှင့်အတူမဿဲ, ။ ရောမကြားတွင်နောင်တအထူးသဘောအရမာကု, ။ ဟေလသလူတို့တွင်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုပေးသောလုကာ။ နှင့်ပိုပြီးပြီးသားယုံကြည်သည်တစျဦးစီ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရည်ရွယ်ယောဟန်သည်။ မသက်ဆိုင်ခေတ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မီ, ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်း၌ကွယ်လွန်သွား - - အများကြီးအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ထိုသို့တဲ့သူတွေကိုသတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တသမတ်တည်းရှင်းလင်း: "ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ဤဂတိခဲ့ရာလက်ခံရရှိဘဲသေဆုံးသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကွာအဝေး၌မြင်ကကြိုဆိုနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာတကျွန်းသူနှင့်ဘုရားဖူးဖြစ်ဝန်ခံခဲ့သည်။ "(ဟေဗြဲ 11:13) ကရာနီ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အောက်တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံအာဒံရဲ့ဦးခေါင်းခွံ၏ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာမှာတော့ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်မှနှစ်ခုကိုစီးအတွက်စီးဆင်းနေသောအသွေးအားဖြင့်သရုပ်ဖော်နေသည် အထက် - ဆင်းခေါင်မိုး၏သင်္ချိုင်းဂူပေါ်နှင့်ထို့နောက်မြွေနှင့်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအပွစျကိုအနိုင်ယူမယ်လို့သူ့ကိုစောင့်နေ, ယုံကြည်ခြင်း၌ကွယ်လွန်သွားသောသူအပေါင်းတို့, ကိုယ်စားပြုသည့် "ဦးခေါင်းခွံ" ဆင်း။
Cf. ကရာနီလေးလမ်းညွန်ဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်။ အရှေ့, အနောက်, တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်: ယရှေုသညျ မှစ. ဗဟိုတိုင်းလမ်းညွန်ထွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသွားပြီးရင်, ရေတွက်။ , ပယ်နဲ့ယေရှုအပေါ်အပေါ်ကြီးစွာသော "မြို့လယ်မြစ်" ၏ကမျြးစာကိုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နှင့်သေးငယ်အခက်: ပရောဖကျတို့၏ပုံဥပမာ / ဓာတ်ပုံကိုအတူ။ 33-34: ကျွန်တော်ပင်ထို့နောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ, ပြီးတော့ "ကို dual ပါဝါ" ၏သဘောအရယေဇကျေလ 47 ကြည့်ရှုယောဟန် 19 ၌ရှိသကဲ့သို့ယေရှု၏သေခြင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုပြနိုင်သလား "ဒါပေမယ့်ရသောအခါ (ထိုစစ်သား) ထိုယေရှုနှင့်လွှဆီသို့ရောက် လာ. , သူကသူတို့ကသူ့ခြေထောက်မချိုးဘဲ, ပြီးသားသေပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစား (Oblique အထက်သို့နှင့်နှလုံး, ယရှေု၏ဗဟို hit) လှံနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်တက်စစ်သူရဲတယောက်ကပ်နှင့်ခကျြခွငျးသွေးနှင့်ရေထွက်ရှိလာ၏။ "ထက်
ပြန်အနာဂတ်အနာဂတ္တိရန်, ယေဇကျေလ 47း8-9: "ထိုအခါကဆိုပါတယ် me'Detta ရေသူ (ကောင်းကင်တမန်) သည်နိုင်ငံ၏အရှေ့ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆီသို့စီးဆင်းနှင့်သဲကန္တာရကျော်, အဲဒီနောက် (အသေကောင်) ပင်လယ်ထဲကဆင်းစီးဆင်း။ အဆိုပါရေသည် (သေလွန်သောသူတို့သည်) မှစီးဆင်းနေတဆင့်ပင်လယ်ဖဲ့, ရေကျန်းမာဖြစ်လာသည်။ နေရာတိုင်း Shoal အတွက်ရွေ့လျားသောမြစ်များတိုင်းသတ္တဝါကပြန်လည်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ။ ဤရွေ့ကား, ရေရှိရရှိသွားတဲ့သောအခါ, ရေကျန်းမာဖြစ်လာများအတွက်ငါး, အဲဒီမှာအလွန်များပြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စီးထွက်ပြေးဘယ်မှာအရာအားလုံးဘဝကိုထံသို့မရောက်ရ။ "ဒီပင်လယ်သေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်သမ္မာကျမ်းစာရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လာပြီ, ယရှေုစျေးကြီးဖွနေိုငျသှေးနှငျ့ vattendopets အတွင်းပိုင်းသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သမ္မာကျမ်းစာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, သန့်ရှင်းသော, ကျန်းမာ။ ကျနော်တို့ကောင်းကင်အသက်တာ၏ဆောငျသူဖြစ်လာသည်။ မီ "väckelsemötenas" သီခငျြးမြားတှငျ, ကကရာနီ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ပြေးသော "ယုံကြည်ခြင်း၏အရင်းအမြစ်" ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ခဲ့ ဥပမာအားဖြင့် (အောင်ပွဲခံ Toner ကိုကြည့်ပါ): "ဤတွင်အရင်းအမြစ်စီးဆင်းသူမကတွေ့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သူမသည်နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ဝှက်ထားပေမယ့်သိသာဖြစ်ပါသည် "(246) -" ။ ဘုရားသခင့ဆာလောင်မွတ်သိပ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအများအပြား၌ရေနှင့်ပြည့်ဝ၏။ ကျော်ပွက်ပွက်အဖြစ်တက်နေရင်းရေနေထိုင်ခြင်း၏တစ်ဦးကအရင်းအမြစ် "(383) -" ။ တစ်ဦးကအံ့သြစရာ, အံ့သြစရာအရင်းအမြစ်ယေရှုရဲ့အနာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အအဝတ်လျှော်အပေါ်မိုဃ်းပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ, ရှိသမျှအပြစ်များသန့်စင်။ "(524)
ကျွန်တော်တို့ကိုသမ္မာတရားကိုရှောင်ဖယ်မရကြကုန်အံ့။ ကမျြးစာကိုကယျတငျတျောမူခွငျး၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ငါသံသယတင်းကျပ်မအချိန်ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ကဆိုသည်မဟုတ်, တူသောအခုတော့ပါပဲ။ သမ္မာကျမ်းစာ / ပရောဖက်ပြု - - ငါတို့သို့ကြီးစွာသောနှင့်နက်ရှိုင်းသောယူပါလျှင်အမြင်များ (တစ်ခါတစ်ရံပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်နေရာအမည်များ၌ပုန်းဖြစ်ရပ်များ၏သင်တန်းများအတွက်လျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲများ, etc), အခြေအနေကျနော်တို့ကရန်သူ၌ထားကြ၏ထောင်ချောက်ကိုတှနျးလှနျနိုငျသော သာ. ကွီးမွတျပါ, အစုံ tripwires တွင်းတူး။ ဟုတ်ပါတယ်, သှေးဆောငျမှုအပြည့်အဝအကွာအဝေး။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်မယုံကြည်သော၏အခညျြးနှီးကျော်ကြီးပြင်းပါစေ! ကမျြးစာကမှန်သည်! အနာဂတ္တိစကားမှန်လာ! ယရှေုသညျအစဉ်အမြဲအဖြေပါ!
လွတ်သင်္ချိုင်းအပြင်ဘက်တွင်ဥယျာဉ် / ဥယျာဉ်တော်၌ထမြောက်တော်မူယေရှုနှင့်အတူသူမ၏တှေ့ဆုံအကြောင်းကို,: ဒါဟာမာရိသညျဂဒလမာ (11-18, ယောဟန် 20) အကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့လှုံ့ဆျောဖြစ်ပါတယ်။ - ဘယ်လိုပထမဦးဆုံးမှာသူမမသိပေမယ့်မိမိအဝမ်းနည်းမှုကအေဂျင်စီရဲ့ဥယျာဉ်မှူးတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ "ယေရှု Kvinna, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ငိုနေကြတယ် '' သူမရဲ့ပြောဆို၏ အဘယ်သူသည်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည် "သူကဥယျာဉ်မှူးနှင့်ကလညျးထင်:? '။ သငျသညျသူ့ကိုချပြီ, ငါ honom ယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ Herre, သင်ပယ်ရှင်းသူ့ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့ကြပါလျှင်, ပြောပြ' ယရှေု her'Maria အားဆို၏ .'Then သူမလှည်ဟီဘရူးအတွက်ကလညျး: 'Rabbuni!' - ဆရာဆိုလိုတာက။ ငါသေးခမည်းတော်ထံသို့တက်ပြီကြပြီမဟုတ်များအတွက်ယရှေု, အလုပ်သမားအကြှနျုပျကိုမပေး 'သူမ၏ရန်ကဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ညီအစ်ကိုတို့သွားပြီးသူတို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်နှင့်သင်တို့အဘသည်ငါ၏ဘုရားသခင်နှင့်သင့်ကိုဘုရားသခင်အားတက်နေပါတယ်။
"ဥယျာဉ်ထဲမှာ" / "ဥယျာဉ်ထဲမှာ": အမေရိကန်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်တေးဂီတကိုစာရေးဆရာ, မိုင် C. Austin (1868-1946) သည် 1912 ပြန်လည်သီချင်းရေးခဲ့တယ်။ သူကအချည်းနှီးသောသင်္ချိုင်းဂူအပြင်ဘက်ထမြောက်တော်မူယေရှုနှင့်အတူမာရိသညျဂဒလမာရဲ့တှေ့ဆုံထံမှနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအမှုကိုပြု, ဒါပေမယ့်လည်းမိုင်သူ့ကိုယ်သူခဏသူဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ လာ. , "ဥယျာဉ်မှူး" တွေ့ဆုံခဲ့ရသူတစျခုဖွစျသညျ - ကဖို့ "ပြန်လာ" ၏တစ်ခုခုခဲ့သည် ဘုရားသခငျသညျရဲ့အသံကိုခေါ်ဆိုနှင့်အတူဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်တော်။ ထိုသူတို့ကကသီဆိုကြားလျှင်ကြောင့်dopsångအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ လာ. ဤမျှလောက်များစွာသော, ယရှေုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးစေခြင်းငှါလာသည်ဟုအဓိပ်ပာယျသီခငျြးကိုအပြင်၌။ တစ်ဦးတည်းကိုသင်ခြင်းခံမရေ / က "မြစ်" လာမယ့်သို့တဦးတည်းမြင့်တက်လာရှိ "ဥယျာဉ်တော်" ရိုက်ထည့်ပါနှင့် - ယေရှုအားတက်နီးကပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောင်းလဲခြင်း။ မြစ်ချောင်းများနှင့်တဦးတည်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်း၏အရင်းအမြစ်။
ဤတွင်နာရီ 1925 ဖွငျ့ Swedish သို့ဘာသာပြန်ထားသောဧဝံဂေလိတရားကို:
နှင်းပွင့်ပေါ်နေဆဲစဉ်ငါ Avenue ၏ဥယျာဉ်တော်သို့ရောက်ကြ၏။ ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေသည်စကားသံကိုငါကြား, သငျသညျယခုငါ့ထံသို့ယူခဲ့ပါလော့။
ref ။ ထိုအခါငါငါ့ကိုယ်ပိုင်ရင်သားကင်ဆာ၌သူ၏အသံကိုကြားလျှင်, သူငါသညျသူ၏ပေါ့ကပြောပါတယ်။ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တည်ရှိဘယ်တော့မှတူရာအသစ်တစ်ခုကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်, အဘို့အမှလွတ်မြောက်ရန်စိုးရိမ်စိတ်။
သူကငှက်သီဆိုကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်အကြောင်း, ဒါကြောင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုသည်။ အဆိုပါသီချင်းဆိုဘို့, ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်အတူ, ရှိသမျှအကြံအစည်မိုးသည်းထန်စွာမြို့သို့ပြေးကြလော့။
ထိုဥယျာဉ်၌ငါလိုခငျြယူ, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာအပြင်ဘက်အျောဟစျသံငါ့ကိုနှောင့်ရှက်။ ထိုမင်းသည်သွားကြဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်, အလဲနည်းနည်းရန်, ထိုသူတို့အဘို့သူကသူတို့အသေခံခြင်းငှါသွားလေ၏။